Sina Avoavo avo lenta telo halavany 755 808 1064 bara fanesorana volo fantsona diode micro fanamboarana sy orinasa | Danye
Avoavo avo lenta telo halavan'ny 755 808 1064 bara fanesorana volo laser diode fantsona mikraoba
Laser Alemana, tifitra tsy voafetra mandritra ny fiantohana; Laser diode diary kely, rafitra fanesorana volo matihanina; Hery lehibe, fikojakojana mety, androm-piainana lava, malaza amin'ny fampiasana hopitaly;
Ny rafitra dia mampiasa ny halavan'ny halavan'ny fanesorana volo 755 808 1064nm diode ho an'ny fidirana lalina ao amin'ny dermis misy ilay follicle volo. Amin'ny fomba fitsaboana, andiam-pitenenana malefaka ambany, ny pulses famerimberenana avo dia mampiakatra ny mari-pana amin'ny follicle volo sy ny manodidina, ny sela mamelombelona hatramin'ny 45 degre Celsius. Ity fandefasana hafanana miandalana ity dia mampiasa ny chromophores ao anaty vatan'ny manodidina azy ho toy ny fitoeram-bary manafana ny fololon'ny volo. Io, miaraka amin'ny angovo hafanana entin'ny volo volo mivantana, manimba ny follicle ary manakana ny fitomboana indray.
Ny masinina laser diode 808nm dia mandaitra indrindra amin'ny melanositin'ny follicle volo nefa tsy misy ratra manodidina ny tavy. Ny hazavana laser dia azon'ny volo volo sy ny volon'ny volo ao amin'ny melaninina ary navadika ho hafanana, ka nampitombo ny hafanan'ny fololon'ny volo. Rehefa miakatra ny mari-pana ampy hanimba ny firafitry ny volo, izay manjavona aorian'ny fizotran'ny fizolo voajanahary ny follicle volo ary hahatratra ny tanjon'ny fanesorana volo maharitra.
1.Ny karazana fanesorana volo amin'ny vatana (volo amin'ny tarehy, manodidina ny faritra molotra, volombava, underarm, volo amin'ny sandry, tongotra, tratra ary faritra bikini)
2. fanalefahana hoditra indray
Laser karazana Laser fantsom-pifandraisana Diode
halavan'ny onjam 808nm 755nm 1064nm onja mifangaro
Panel miasa Efijery mikasika LCD 15 miloko LCD
Ny haben'ny sangan-tanana 12 * 12mm
Fomba fanaterana Kopian'ny safira mivantana Soprano
Ampidiro Herin'ny fitaovana 3000W
Maody haingana (FHR):
Hakitroky ny herinaratra 5-10J / cm2 azo ovaina
Famerimberenana matetika 10Hz
Maody matihanina (HR)
Hakitroky ny herinaratra 6-50J / cm2 azo ovaina amin'ny alàlan'ny elanelam-pahefana voafetra (Max.120J / cm2 misy)
Famerimberenana matetika 1-5Hz azo ovaina amin'ny halavan'ny pulse voafetra
Pulsa sakany fiara
Fomba mangatsiaka Rindrambaiko mivezivezy amin'ny rivotra +
Haavo mangatsiaka ny fampangatsiahana avy hatrany ny safira sy ny fihenan'ny hoditra amin'ny 0 ~ -5 ℃
Ny haben'ny masinina L47cm * W44cm * H127cm
Lanja afa-karatsaka 48kgs
Teo aloha: epilacion laser ipl mahery pulsa jiro laser epilation hatsaran-tarehy milina vidiny DY-B1
Manaraka: Fantsona mikraoba maharitra 808 755 1064 fanesorana volo laser diodo milesman DY-DL811
Fantsona mikraoba maharitra 808 755 1064 diod laser ...